कस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ? - Birgunj Sanjalकस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ? - Birgunj Sanjalकस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ? - Birgunj Sanjal
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०६:५८
काठमाडौँ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ। साथै, नेपालको पुर्वी भूभाग नजिकै निम्न चापीय रेखा रहेको महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशभर सामान्य बदली रही देशका प्रदेश ५, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही भूभागमा वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ ।